Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 4t l0312 zom
Zoma 19 Okt.
Vakio “Ny Famoronana” – PM, tt, 23-31.
“Nohariana araka ny endrik’Andriamanitra ny olona tamin’ny voalohany. Tanteraka izy teo amin’ny fifandrindrany tamin’ny toetran’Andriamanitra sy ny lalàny; voasoratra tao am-pony ireo foto-kevitry ny fahamarinana. Nampisaraka azy tamin’ny Mpanao azy anefa ny fahotana. Tsy nitaratra ny endrik’Andriamanitra intsony izy. Niady tamin’ny foto-kevitry ny lalàn’Andriamanitra ny fony. ‘Fandrafiana an’Andriamanitra ny fihevitry ny nofo, fa tsy manaiky ny lalàn’Andriamanitra izy, sady tsy hainy izany’ - Rôm. 8:7. Nefa ‘toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny Zanani-lahy tokana’, mba ho vita fihavanana amin’Andriamanitra ny olona. Amin’ny alalan’i Kristy dia azo averina indray hifandrindra amin’ny Mpanao azy izy. Tsy maintsy havaozin’ny fahasoavan’Andriamanitra ny fony; tsy maintsy manana fiainana vaovao avy any ambony izy. Io fiovana io no fahateraham-baovao, izay nolazain’i Jesosy fa izay tsy manana ‘dia tsy manazo mahita ny fanjakan’Andriamanitra’” – HM, t. 481
“Miankina amin’ny fahatokiana hanaraka ny drafitra naorin’Ilay Mpahary ny fahombiazana eo amin’ny fanabeazana. Nahary ny olona tahaka ny endriny Andriamanitra tamin’ny voalohany, ary noravahany fahaizana ambony sy sahaza azy tsara izy. Nihasimba ireny fanomezam-pahasoavana ireny, noho ny fahalavoan’ny olona sy ny voka-dratsiny. Nandoto sy namafa tanteraka ny endrik’Andriamanitra teo amin’ny olona ny fahotana. Ny mba hamerina indray io endrika io ao amin’ny olona no nanorenana ny drafi-pamonjena sy nanomezana fotoana fizahan-toetra ho antsika. Ny hiverina amin’ny fahatanterahantsika tany am-boalohany, izany no zava-dehibe eo amin’ny fiainana ankehitriny sy ny tena fototra kendren’ny fanabeazana.” – PP, tt. 630-631.
1. Aiza ho aiza ny toeran’ny fampianarana momba ny fivoarana miandalana eo amin’ny ady ifanaovan’ny ratsy sy ny tsara? Ahoana no fomba nampiasan’i Satana io fampianarana io hamotehana ny finoana ny Baiboly?
2. Zahao ireo andininy rehetra miresaka momba an’i Adama ao amin’ny Testamenta Vaovao. Moa ve tsy hita mazava tokoa fa ninoan’ireo mpanoratra ny Testamenta Vaovao rehetra ny maha-olona tena nisy an’i Adama? Nahoana io fahatakarana io no zava-dehibe ho an’ny fahafantarantsika tsara ny maha-isika antsika, ny nahatongavantsika amin’izao toerana misy antsika izao, ary ny fanantenana ananantsika ao amin’i Jesôsy?
3. Diniho misimisy kokoa ny amin’ny famerenana antsika indray ho araka ny endrik’Andriamanitra. Ahoana no fomba tokony hahatakarantsika izany, indrindra indrindra fa zavaboary mety lo sy mety maty, mora marary ary marefo isika?
4. Fampianarana anankiroa tena fototra indrindra eo amin’ny resaka fizìka no mifanohitra mivantana, (ny “théorie quatique” sy ny resaka “relativité” an-kapobeny). Tokony hilaza inona amintsika izany mikasika ny tokony hahamailo antsika eo amin’ny fanekena ny zavatra sasantsasany ho mitombina, satria ny siansa no milaza azy?